အဆိုပါကျန်ကြွင်းပြန်လည်သုံးသပ်: 'လှေနှစ်ခုနှင့်ရဟတ်ယာဉ်' (ရာသီ 1, အပိုင်း 3) - တီဗီ
အဆိုပါကျန်ကြွင်းပြန်လည်သုံးသပ်: လှေနှစ် ဦး နှင့်ရဟတ်ယာဉ် (ရာသီ 1, အပိုင်း 3)
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြproblemsနာများရှိနေသေးသော်လည်း 'Boats Two and Helicopter' သည် Leftovers ၏အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏တတိယအပတ်မှာ, အဆိုပါကျန်ကြွင်း ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၏ရဲရင့်သောခြေလှမ်းကြာ: Reverend Matt Jamison (Christopher Eccleston), ငါတို့သေးသိရန်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ဖို့အခွင့်အလမ်းဆည်းပူးကြပြီမဟုတ်သူတစ် ဦး ကိန်းဂဏန်း။ ဤအချက်များအထိသူသည်ပြပွဲ၌သူ၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုများတွင်သူရဲကောင်းများနေ့ချီတက်ပွဲအတွင်းလူများကိုအော်ဟစ်ခြင်း၊ ကော်ဖီဆိုင်ပြင်ပရှိလူများကိုအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမြို့ဝမ်းနည်းဖွယ်အိတ်ကပ် Nora Durst ကိုပွေ့ဖက်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ဒါဟာနှင့်အတူထပ်တလဲလဲပြissueနာပါပဲ အဆိုပါကျန်ကြွင်း ကြောင်းဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလေထု - အဆောက်အ ဦ ၏မျက်နှာသာအတွက်ရိုးတံရရှိသွားတဲ့။ ဒါကြောင့် Lindelof နှင့်တွဲဖက်။ Matt ကိုသူ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြရန်မသင့်တော်ဟုထင်မြင်မိသည်။ ယခုအပတ်တွင်သူသည်သူ၏ဘုရားကျောင်းသို့တက်ရောက်ရန်ကျဆင်းခြင်း၊ သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အမှားအယွင်းများသောယုံကြည်မှုစနစ်အပါအ ၀ င်သူ၏ Post-Rapture အခက်အခဲများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သိုင်းကြိုး, လက်ဝဲ ချစ်သူများ (သိပ်မကြာမီ?), ဒါကြောင့် Mapleton အတွက်အခြားအပြစ်ပေးနာရီပါပဲ။
darth Vader လူဆိုးစာရင်းတ ဦး တည်းအယူအဆအနုပညာ
Matt ဟာသူ့အသင်းတော်ကိုကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြတဲ့အခါဒီအဖြစ်အပျက်ကစတင်နေပြီ။ သငျသညျရှေ့တော်၌ဤတစ်ခုကြားဖူးတယ်ဆိုရင်ငါငါ့ကိုရပ်တန့်ပြောချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ရှိသည်ငါတကယ်ရပ်တန့်ခံရဖို့ချင်ကြဘူး, သူကစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကောင်လေးသူသည်စုံလင်မဟုတ်ပေမယ့်ကောင်းသောသူတစ် ဦး သည်ဆိတ်သငယ်ရဲ့, သူသည်ဆယ်နှစ်သမီးအရွယ်အခါ, သူ့အမေနှင့်အဖေသူတစ် ဦး ကလေးအစ်မရှိမယ့်ကြောင်းသူ့ကိုပြောပြပါ။ ထိုမိန်းမသည်လာနှင့်သင်တန်းသူသည်သူမ၏အလွန်ချစ်ပေမယ့်သူမအာရုံကိုလာပြီပါတယ်။ မိမိအာရုံကို, ဒါကြောင့်သူကဆန္ဒရှိပြန်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့, အကယ်စင်စစ်သူဆုတောင်း, ဆန္ဒရှိသည်။ တစ်လအကြာတွင်သူသည်စူးရှသောသွေးထွက်သွေးကင်ဆာရောဂါရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဘာမျှမကျန်တော့သည့်တိုင်အောင်ကင်ဆာရောဂါသည်ကောင်လေးအား စား၍ သွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူကအဲဒါကိုတိုက်ဖျက်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ်၊ ​​အခုသူမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိနေပြီ။ သူကသူဟာအပြစ်ပေးခံရတာလား၊ သူပြောသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Matt ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတံခါးဝမှချိုးငှက်များကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကကျေးဇူးတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် လုပ်တယ် ၁
ကစားကွင်းအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုတွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်မေ့မြောနေသည့်နောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီကောင်လေးကအခုအာရုံစိုက်မှုအတွက်ဆုတောင်းနေတယ်။ အမ်မလီအတွက် ဆုတောင်းကြပါစို့။ ကျနော်တို့ကသူ့အသငျးတျောကိုကြည့်ပါ - နီးပါးအချည်းနှီးပါပဲ။ ရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားသောကမ္ဘာကြီး၌လူတို့သည်လမ်းပြပေးခဲ့သောဘာသာတရားကိုလူအနည်းငယ်ကမကျေနပ်ဟုထင်ရသည်။ စကားလုံးမဲ့စွာ, bandana ဝတ်ထားသောသူသည်ဘုရားကျောင်းထဲသို့ဝင်။ သူကဒေါသထွက်နေတယ် ချာ့ချ်၏ရှေ့မှောက်၌သူနောက်သို့လိုက်ကာ Matt ကိုထိုးနှက်။ ထိုးနှက်ခဲ့ပြီးနောက်သူ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှေ့တွင်သွေးထွက်သံယိုများဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် Matt ကိုလက်ကမ်းစာစောင်ပြသသည် - သူမသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရောင်းခဲ့သည်၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရုပ်ပုံနှင့်အတူမက်မက်သည်ဘုရားသခင်အားမည်သည့်အခါကမျှရွေးချယ်တော်မူခြင်းခံရမည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူက Matt ရဲ့ပါးစပ်နှင့်အရွက်ထဲမှာလက်ကမ်းကြော်ငြာ stuffs ။
ကီဗင်သည်ဆေးရုံ၌ Matt သွားလည်သည်။ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်, Matt ကဒဏ်ရာအကြောင်းပြောပြီး“ မင်းဘာလုပ်မှာလဲ။ လူများပယ် pissing ရပ်တန့်, Kevin retorts ။ သူတို့ကအမှန်တရားကိုကြားဖို့လိုတယ်၊ မင်းအဖေသိတယ် ကီဗင်က“ သူဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်အဖြူရောင်အလံအနေဖြင့် Matt ကိုညစာစားရန်ဖိတ်သည်။ ညကကျွန်မအတွက်ခက်ခဲတယ်၊
Matt သည်ညှိုးနွမ်းနေသောလူရွှင်တော်နှင့်အတူစီးနင်း။ ကွဲပြားသောအထပ်သို့လည်ပတ်ရန်ဓာတ်လှေကားပေါ်သို့တက်သည် (တကယ်တော့ Lindelof၊ တကယ်လား?) ဘဏ်မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုငြင်းပယ်ပြီးနောက်သူသည်သူနာပြုဆရာမနှင့်တွေ့ဆုံပြီးသူမအမ်မလီသည်နိုးလာပြီးကောင်းမွန်နေကြောင်းပြောပြသည်။ ဒီမနက်မှာသူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်၊ ကောင်းပြီ၊ သူမကမနေ့ညကအိပ်ရာကထတယ်။ Oof ။
ထိုညနေခင်းတွင် Matt သည်အသင်းတော်ဟောင်းတစ် ဦး ထံမှအလည်အပတ်ခရီးရရှိသည်။ သူ့မှာပိုက်ဆန်လျှော်ကလေးရှိနေတယ်။ သူ့ဇနီးကဆေးကုသနေတုန်း Matt ကိုနှစ်ခြင်းခံခိုင်းတယ်။ သူသည်အံ့အားသင့်သွား၏ - ထိုနေ့ရက်များသည်ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပေ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဗတ္တိဇံခံနေသော်လည်းထိုသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တွန့်ဆုတ်နေသည်။ သူ၏ဇနီးသည်ဘာသာတရားတစ်ခုလုံးအပေါ်စိတ်ပျက်အားလျော့လာသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ထိုသူသည် Matt အားရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားချိန်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသောလောင်းကစားသူ Andrew အကြောင်းပြောပြသည်။ သူ၏မျက်နှာသင်္ချိုင်းတွင် Matt သည်ဘောပင်တစ်ချောင်းနှင့်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးအနာဂတ်လက်ကမ်းကြော်ငြာအတွက်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Andrew ကကျက်စားတဲ့လောင်းကစားရုံမှာ Matt ကိုတွေ့တယ်။ သူကရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ကိုးနှစ်အရွယ်တူမကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ကလေးငယ်အဓမ္မပြုကျင့်သူအကြောင်းလည်းပြောပြတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤလူများကိုသူတို့အမှန်တကယ်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ရန်လိုသည်ဟုသူကဆိုသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်မဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်ကင်းသူတွေကိုခွဲခြားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ခံစားခဲ့ရသမျှတွေ၊ ငါတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ မန်နေဂျာကပြုံးပြီးသူ့မျက်လုံးတွေကိုလှိမ့်လိုက်တယ်။ မင်းရဲ့မျက်နှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ထင်တယ်။ သူတို့နောက်ထပ်စကားမပြောမီ, မန်နေဂျာသည်လောင်းကစားစားပွဲပေါ်ရှိခိုအချို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်ထွက်သွားသည်။ ရေပိုကျပန်းတိရိစ္ဆာန်များ! Matt သူတို့ကိုထူးဆန်းကြည့်ပေးသည်။
အသစ်သော jeepers creepers ထွက်လာပါဘူး
နဂါးငွေ့တန်း၏နဝတ Corps အုပ်ထိန်းသူများ
ပြတိုက်မှာအာဒမ် Sandler ညဥ့်
အသစ်က Harry Potter သည့်အခါထွက်ကြွလာ